Villa Somalia - Khudbadda Madaxweynaha Kalfahdiga 4-aad ee Baarlamaanka JFS
Khudbadda Madaxweynaha Kalfahdiga 4-aad ee Baarlamaanka JFS
Guddoomiyaha Golaha Shacabka JFS Mudane Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, Gudoomiye Ku Xigeenadda Ra’iisul wasaaraha iyo Golaha wasiirada, Guddoomiyaha Maxkamadda sare, iyo Xildhibaannada sharafta leh ee Goleyaasha Shacabka, Taliyaasha Ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Guddoomiyaasha Golaha Shacabka ee Hirshabeele iyo Galmudug, Danjireyaasha martida inoo ah iyo dhammaan marti sharafta kale, waxaan idinku salaamay.
Assalaamu Caleykum Waraxmatullaah Wabarakaatuhu.
Guddoonka Golaha Shacabka iyo xildhibnaanadda sharafta leh,
Waxaan halkaan rabaa in aan uga tacsiyeyno maanta qarixii waxashnimada ahaa ee lagu laayay dad shacab ah oo aan waxba galabsan, oo ay ku bartilmaameedsadeen Masaajid iyo goobtii dadka loogu adeegaayay halkaasna ay ku dhinteen dad aan waxba galabsan, waxaan rabnaa in aan tacsidaas u dirno ehelladii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen inta dhaawaca ahna waxaan ilaahey uga baryeynaa in uu si deg deg ah uga kiciyo.
Waxaan rabaa in aan faataxo u aqrinno in dadkaas intii dhimatayna uu Ilaaheey naxariistiisa iyo jannadiisa siiyo inta dhaawacantayn uu Ilaaheey uu si degdeg ah u bogsiiyo.
Waad aragtaan argagixisadaan oo innaba ha yaraatee aan naxaynin oo tilmaamanaya ama bartilmaameedsanaya meelaha dadka Shacabka ah ay joogaan ama looga adeego, waxay muujineysaa dadkan in ay yihiin cadaw Soomaaliyeed, cadaw islaam in ay yihiin oo ay tahay Shacab iyo dowladdu in ay meel uga soo wada jeestaan. Qof walba oo dhallinyaro ah iyo qof walba oo Soomaali ah in uu u istaago sidii aan uga hortagi lahayn horrorkaas aan umadda Soomaaliyeed u naxaynin, oo aan labo jibbaarno hawlgalada iyo isdiyaarinta sidii aan dalkaan uga xorreyn lahayn.
Marka hore Eebbe ayaa mahad leh oo inoo suurtageliyey inaan maanta oo Isniin ah, 10ka Sebteember 2018 aan iskugu nimaano furitaanka kaldfadhiga 4-aad ee Golaha Shacabka ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya
Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa guddoonka iyo xildhibaanadda Golaha Shacabka oo fursadan qaaliga ah ii siiyey si aan u furo kalfadhigan taas oo ka mid ah waajibaadkeyga dastuuriga ah.
Kalfadhiyadii hore ee Golaha Shacabka waxaa u suurtagashay shaqooyin muhiim ah oo aas-aas u ah geeddi socodka dowladnimada Soomaaliyeed, waxaa kaloo wali jira shuruucyo badan ama shuruucyo muhiim ah oo wali horyaala, kuwaas oo u baahannahay in si deg deg loo ansixiyo.
Dalkeennu wuxuu ku jiraa geeddi-socod siyaasadeeed, dhaqaale, amni iyo bulsho. Qofkasta oo inaga mid ahna mas’uuliyad ayaa ka saaran arrintaas sidii aan uga mira-dhallin lahayn.
Qorshaha Dowladda ee inta uga harsan waqtigeeda wuxuu ku aruursan yahay:
1. Arrimaha amniga iyo Cadaaladda
2. Siyaadda Loo Dhanyahay
3. Horumarinta Dhaqaalaha iyo
4. Horumarinta Arrimaha Bulshada iyo wacyigelintooda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go’an inay dalka gaarsiiso xasillooni, nabad waarta iyo barwaaqo iyada oo loo marayo dib-u-habeyn dhinaca amniga oo ah udub dhexaadka horumarka iyo xasiloonida Qaranka, kuna salaysan caddaalad ka kooban ciidan iyo garsoor xalaal ah oo sharci ku ilaaliya danta dalka iyo dadka. Fulinta hannaan ka mira dhaliya rabitaanka ummadda Soomaaliyeed ee ku salaysan ciidan amniga looga seexdo iyo garsoor caddaalad loogu yimaado, haystana kalsoonida Shacabka ummadda Soomaliyeed.
Geeddi-socodka siyaasadeed ee loo dhanyahay oo ka kooban arrimaha Dib-u-eegista Dastuurka, Federaaleynta iyo Doorshooyinka, waxey qeexaysaa tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toos ah, oo leh halbeeg caalami ah 2020ka. Waxaa heshiis laga gaaray siyaasada wada xaajoodyada ee wadaagga khayraadka sida kalluunka, batroolka iyo Macdanta iyo hannaanka doorashooyinka dalka.
Waxaa la dar-dargeliyay qaadista canshuuraha, taas oo ah jidka keliya ee aan kaga bixi karno gacan-hoorsi shisheeye uuna shacabka Soomaaliyeed ku heli karo adeegga dowlada. Sannadkii 2017kii waxaa dakhliga gudaha ee dalka la gaarsiiyay heer aad u wanaagsan, iyadoo ay khasnadda dowladda kusoo xarootay $140 milyan. Sannadkan 2018 kana waxaa la filayaa in dakhligu uu intaas ka sii kordho.
Waxaa guul lataaban karo laga gaaray Barnaamijka Geeddi-socodka Deyn-cafiska, oo ku salaysan heshiis ay wada galeen Soomaaliya iyo Hay’adda lacagta Adduunka (IMF) si deynta adduunku inagu leeyahay oo gaareysa $5 bilyan la inooga cafiyo, isla markaana ay Soomaaliya u hesho deeqo iyo dayn wax-ku-ool ah oo loogu talogalay dib u dhiska iyo horumarinta dalka. Dhammaan shuruudihii muddoodka ahaa ee aan gaarnay oo ku xirnaa cafiskaas dayntaas lacagtaas waan ku guuleysannay illaa maanta, waana tan sababta u ah in Midowga Yurub uu inoo ballan qaaday taageero miisaaniyadeed oo gaareysa $120 milyan.
Waxaa la diyaariyey, isla markaana goleyaasha Baarlamaanka loo gudbiyey shuruuc taageeraysa kobcinta dhaqaalaha iyo maaamul-wanaagga oo ay ka mid yihiin; sharciga maalgashiga, sharciga maamulka maaliyadda, sharciga shirkadaha, sharciga hantidhowrka iyo sharciga ladagaalanka musuq-maasuqa. Waxaa iyana dhowaan lasoo diyaarin doonaa sharciga maamulka dakhliga gudaha iyo dibadda.
Waxaa sidoo kale Horumarinta arrimaha bulshada oo laf dhabar u ah dolwadnimada Soomaaliya sida adeegyada asaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, korontada iyo biyaha iwm laga gaari doono horumar la taaban karo mustaqbalka.
Qorshayaasha Dowladdan muddo xileedkeeda ka dhiman waxaa ka mida ah:
- In 40 sharci oo ay 17 kamid ah ay Baarlamaanka la yaalaan la meel mariyo.
- In la dajiyo 29 qorshe siyaasadood (national policy).
- In la dhiso 17 guddi iyo.
- Inaan Dhisid iyo dayactir ku sameyno 32 xarumood.
Kobcinta dhaqaaluhu waxuu kamid yahay Barnaamijka Hay’ada Fulinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Inkastoo adduunyadu nagu tilmaamto inaan kamid nahay dalalka ugu saboolsan dunida, haddana waxaan haysannaa wax walba oo dal uga bixi karo faqriga.
Haddaba annagoo og in dalkeenna Ilaah ku mannaystay kheyraad badan oo nooc badan sida [Xoolaha, beeraha, Kalluunka, shilaadka iyo macdata dhulka hoostiisa], waxaa dowladdu dedaal ugashay sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa, loogana bixi lahaa caqabadaha dhaqaale ee saameeya nolosha dadka Soomaaliyeed. Tallaabooyinka dhaqaale kobcinta la xiriira ee Hay’ada Fulinta ay juhdiga badan gelisay waxaa ka mid ah:
• Waxaa la dar-dargelinayay qaadista canshuuraha, taas oo ah jidka keliya ee aan kaga bixi karnoo gacan-hoorsi shisheeye iyo shacabka Soomaaliyeed helo adeeg dowladeed.
• Waxaa shaqo-abuur loo sameeyay dhallinyaro badan oo gaareysa dhowr kun oo qof iyadoo qaar kale dhowaan la rajeynayo in shaqo-abuur iyo xirfado shaqo aan u sameyno.
• Waxaan hagaajinnay nidaamka hufnaanta maaliyadda oo fursad noo siinaya in Soomaaliya la aamino markale oo dib loogu xiro hay’adaha dhaqaalaha adduunka oo aan macaamil wanaagsan la yeelanay.
Siyaasadeena Arrimaha Dibadda waxay ku dhisantahay is-ixtiraam, tixgalinta madax-banaanida dal walba iyo wax-wada-qabsi iyo iskaashi. Waxaad la socotaan in Soomaaliya ay door weyn ka qaadatay ama ka cayaartay iskaashiga dhaqaale ee ka hana qaadaya geeska Afrika.
Waxaa guul inoo ah inaynu bilihii na soo dhaafay aynu dadaal ku bixinay ka qeyb qaadashada sidii loo dhameyn lahaa isfaham darradda ka dhex jirtay dalalka Gobolka Geeska Afrika ka dhaxeeya. Waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyay ee isfaham la’aanta dalalka gobolka, waxaana u gudbeynaa marxalad khilaaf la’aan ah (Zero Conflict) iskaashi iyo wax wada qabsi gobolka geeska afrika. Waxaa soo noqday sumcadii iyo sharafkii ay Soomaaliya ku lahayd caalamka, weliba meesha aan rabnay ma soo gaarin boqolkiiba toban laakiin waa u soconnaa.
Waxaan jeclahay inaan idinla wadaago in shirkii Madasha iskaashiga Soomaaliya ee Brussels ay ka soo baxeen natiijooyin kaabaya shirkii Golaha amniga ee horaantii Bisha Juun ka dhacay magaaladda Baydhabo halkaas oo lagu saxiixay hanaanka doorasho iyo kheyraad wadaag ee dalka. Shirkaas oo isugu yimaadeen Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah, iyo Gobolka Banaadir, wuxuuna sii xoojiyey iskaashiga nagala dhaxeeya iyo beesha caalamka. Shirka Brussels waxay beesha caalamka ku amaaneen horumarka ay dowladan tiigsanayso maalin walba ayna cadeeyeen taageerada buuxda ay u hayaan.
Muddanayaal iyo Marwooyin,
Macnaheedu waxa ay tahay in aan waddo sax ah ku soconno, ciddii wax nagu kordhineysana waa soo dhoweyneynaa.
Dalkeena waxaa gaaray burbur xoogan, dib u dhiskiisana waa howl u taala in shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir ah uga shaqeyaan, haddaba annagoo garwaaqsannay baaxadda burburka iyo waqtiga dheer ee aan dunidda ka harnay, waxaa inala gudboon inaynu u istaagno dib-u-dhiska dalkeena, oo cid noo dhiseysa iyo cid lacag nagu siineysa aysan jiri doonin, dib u xoreynta oo aad maanta arkeysaa in carruurteenii horteena lagu laynayo oo qolooyinka horarka ah aan iska xorreyno iyo dib u soo nooleynta kaabayasaasha dhaqaalaha, iyadoo loo marayo Ololaha is-xilqaan oo qof walba oo Soomaaliyeed ay tahay in uu qeyb ka qaato, Ololaha is-xilqaan oo aas-aas u noqonaya in Soomaaliya ay cagaheeda dib iskugu taagto waqti kooban gudihiis.
Ololoha “Isxilqaan” waxa uu halbeeg u yahay udiyaar-garowga Sannad Guurada 60aad ee Maalmaha Xorriyadda Soomaaliyeed ee ku beegan laba sano ka dib.
Ummad walba waxay horumar iyo barwaaqo ku gaartaa markay isku tashato, wax- wada qabsato, gacmaheedana ku hagar baxdo, sidii ay Soomaali hore u tiri “Biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa.”
Waa waajib qofnimo oo saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, waa waajib islaannimo oo saaran qof kasta oo Muslima inuu qurxiyo, horumariyo, wanaajiyo meesha uu ku noolyahay.
Barnaamijka Isxilqaan wuxuu kaloo halbeeg u yahay wadaniga dhabta ah ee ka dhiidhiya dayaca dhulkiisa hooyo. Waxuuna ku qotomaa mabaadi’da asaasiga ah ee dastuurka uu ku dhisanyahay oo si cad u kala qeexaya xaquuqda iyo waajibaadka muwadiniinta.
Ololaha isxilqaan waa barnaamij waxqabad Soomaaliyeed oo aasaaskiisu yahay dhaqanka Soomaaliyeed oo ah isku-tashiga, isku-tiirsanaanta iyo isgargaarida heer walbaba. Waa barnaamij gogol xaar u ah soo bandhigidda wax-qabad muuqda oo ay horseed ka tahay xukumadda oo aan dooneyno inaan dhameystirno ka hor labo sano.
Barnaamijka isxilqaan waa olole dadweyne oo ku dhisan iskaashi si loo dhiso dugsiyadda, wadooyinka, golayaasha murtida iyo wacyigalinta, jardiinooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee guud ahaan dalka.
Si loo fulliyo barnaamijka isxilqaan, waxaa la sameynayaa guddi heer qaran oo ka kooban wasaaradaha ku shaqada leh ee xukumadda, bulshada rayidka ah, cullumo udiinka iyo ciidamada.
Waxaa la abuurayaa injineero iyo farsamo-yaqaano ka shaqeeya howlaha dib-u-dhiska, iyadoo Jimce walba muwaadin walba laga doonaayo labo saac iyo bar iyo in uu galiyo dib u dhiska dalkiisa. Waddamo badan ayaa soo maray burburka aan soo marnay maantana ay tahay in lagu daydo.
Guddigan ayaa abaabulaya bulsha-weynta Soomaaliyeed, dhalinyaro, waayeel, haween, shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada.
Barnaamijkan ayaa ku dhisan in qofku xoogiisa, xoolahiisa iyo xirfadiisa ugu tabaruuco dalkiisa, hase yeeshee waaxaa la furi doonaa sanduuq ay dhaqaale ku ridayaan qurbajoogta, ganacsatada, bulsha-weynta Soomaaliyeed ay ugu deeqaayaan barnaamijkaan.
Wajiga kowaad ee barmaajika isxilqaan waxaa lagu bilaabi doonaa hey’adaha iyo dhismayaasha kala ah;
Golaha Murtida iyo wacyigalinta dadweynaha.
Isbitaalka Banaadir .
Dib u dhiska wadooyinka iyo dayactirka buundooyinka.
Waxaan rajeynayaa in Xildhibaanada sharafta leh aad dowr weyn ka qaadataan Barnaamijka is-xilqaaan, waxaan sidoo kale halkan uga baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qataan oo mugleh. Qof walba oo Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaayaa haddii ay tahay xoog, khibrad iyo dhaqaale wixii ay awooddooda ah inay ku tabarucaan oo ay uga qeyb galaan ololahaan.
Waxaan kusoo gabagabeenayaa in maanta oo bishu tahay 10 ka September2018 uu inoo furan yahay Kalfadhigii 4aad ee Golaha Shacabka.
=Wa Billaahi Tawfiiq=